नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३० औं वर्षमा, नियामकीय क्षमता बढाएर काम गर्दै छौं : अध्यक्ष हमाल | आर्थिक अभियान
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३० औं वर्षमा, नियामकीय क्षमता बढाएर काम गर्दै छौं : अध्यक्ष हमाल
२०७९ जेठ, २५
नेपाल धितोपत्र बोर्ड आजदेखि ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०५० सालमा स्थापना भएको बोर्डले धितोपत्र बजार सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । लगानीकर्तालाई लगानी शिक्षादेखि वित्तीय साक्षरतासम्मका कामहरू बोर्डले गर्दै आएको छ । ३० वर्षको अन्तरालमा बोर्डले धितोपत्र बजार सुधारका लागि निर्वाह गरेको भूमिका, ऐन, नियम र विनियमावलीमा गरेको सुधारलगायत आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा आर्थिक अभियान दैनिकका बलराम बुढाथोकीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग गरेको कुराकानीको सार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड २९ वर्ष पूरा गरी ३० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा धितोपत्र बजार सुधारका लागि के–कस्ता पहल भए ?
पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा धेरै सुधार भएका छन् । हामीले पहिले भएका नियम कानून संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरेका छौं । तर, बजारलाई ‘फेयर’ बनाउन अहिलेसम्म सकेका छैनौं । यो हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । हामीले समयसापेक्ष नियम कानून बनाएकै कारण अहिले पूर्ण अनलाइन कारोबार सम्भव भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । हाम्रा नियम कानून पर्याप्त मात्रामा छन् । तर, स्रोत साधन र जनशक्तिको कमीले गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो ।
कतिपयले त नियम कानून समयसापेक्ष भएनन्, धितोपत्र बोर्ड परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भएको छ भन्छन् नि ?
हो, हामीले यो कुरालाई स्वीकार गरेका छौं । हामीले समय अनुसारका कानून बनाएका छौं जस्तो लागे पनि हामीले गरेका कामहरूको मूल्यांकन बाहिरबाट हुने हो । हामी नै पूर्ण होइनौं । हामीले सुधार गर्नुपर्ने त्यस्ता ऐन नियम पनि आफै परिमार्जन गर्दै जानेछौं । तत्कालै पनि केही ऐन परिमार्जन गरिहाल्नुपर्नेछ । नियमावली भन्ने कुरा त समयअनुसार परिवर्तन त भइ नै हाल्छ ।
धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमन गर्ने क्षमता बढाउन सकेन भन्ने गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?
हो, यो कुरा बजारले मूल्यांकन गरेको छ । नियमनकारी निकायले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुरूप काम हुन सकेन कि भन्ने महसूस मलाई पनि हुन्छ । तर, यसमा हामीले गर्न सक्ने कति हो, त्यो क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ ।
हामीले अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको सही निचोड निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर, सरकारी काम गर्ने शैलीले गर्दा आम जनमानसले महसूस गर्नेगरी काम हुन सकेको छैन । यसका लागि हामीले दक्ष जनशक्ति र क्षमतामा पनि विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले काम गरिरहेका पनि छौं । आगामी दिनमा हाम्रो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरेर काम गर्नेछौं ।
धितोपत्र बोर्डले स्थापना भएदेखि ३० वर्षको अवधिमा सम्झनलायक काम के गर्‍यो ?
धितोपत्र बजारमा महत्त्वपूर्ण काम भएको भनेको अनलाइन सिस्टम लागू हुनु हो । यो ३० वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काममा पर्छ । अहिले अनलाइन सिस्टमबाट लगानीकर्ताले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्ने वातावरण बनेको छ । सामान्य अवस्थामा ५–६ वर्षमा हुने काम कोभिडले गर्दा एकै वर्षमा भएको छ । यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । त्यो काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । अहिले धितोपत्र बजारमा करीब ५२ लाख लगानीकर्ता प्रवेश गरिसकेका छन् । यो पनि बोर्डले गरेको सुधारकै उपज हो ।
त्यस्तै दोस्रो बजारमा करीब १३ लाख लगानीकर्ता टीएमएसमार्फत कारोबार गर्छन् । शेयर बजारको बारेमा गाउँगाउँसम्म प्रचार फैलिएको छ । यो पनि अनलाइन प्रविधिकै प्रतिफल हो । त्यसैले यो धितोपत्र बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा पर्दछ । नेप्सेको प्रणालीमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । यसलाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय बजार घट्दै गएको छ । बजार घट्दै जानुमा बोर्डको अभिभावकीय भूमिका कमजोर भयो भन्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ । यथार्थ के हो ?
बजार घट्दै जाँदा लगानीकर्तामा निराशा छाउँछ । त्यो यथार्थ हो । तर अहिलेको अवस्था के हो भन्नेबारे पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले निश्चित स्वार्थ समूहको मात्र माग बोकेर हिँडेका हुँदैनन् । तर, कतिपय लगानीकर्ताले समग्र धितोपत्र बजारको सुधारको एजेण्डा पनि बोकेका हुन्छन् । त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको बजार घटिहाल्नुपर्ने त होइन ।
तर, पछिल्लो समय तरलता अभाव लगायत विभिन्न कारणले बजारलाई प्रभाव पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत शेयर बजारको सम्बन्धमा ठोस नीति आएको छ । गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने अवसर दिइएको छ । हामीले यो नीतिलाई अगाडि बढाइसकेका छौं । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । एनआरएन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्न सक्ने वातावारण चाँडै नै बनाउनेछौं । यसले शेयर बजारलाई थप सकारात्मक टेवा दिन्छ ।
धितोपत्र बजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ बढ्यो भन्ने जनगुनासो पनि छ । यसलाई किन व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न सकिएन ?
हो, यस्ता कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौं । त्यसरी इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएका छौं । तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिं नभएको मैले पनि महसूस गरेको छु । सरकारी काम गर्ने तौरतरीकाले पनि फरक पार्दो रहेको छ । यस्ता कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । म पनि यस्ता पक्षमा सुधार गर्न लागिपरेको छु । हाम्रो अनुसन्धानात्मक पक्ष कमजोर छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ३० वर्षको अवधिमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म कारबाही गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि हामीले अनुसन्धानात्मक पक्षलाई महत्त्व दिएर काम गर्नेछौं ।
धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने आगामी योजना के - के छन् ?
बोर्ड समग्र बजारको सुधार तथा विकास विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ । हालको परिवेशमा बोर्ड तथा धितोपत्र बजार विकासको प्रवृत्ति तथा समग्र बजारको हालको अवस्था, बोर्डको सबल र दुर्बल पक्ष, अवसर तथा चुनौती, नियमन र बजारको वैश्विक तथा क्षेत्रीय अवस्थाको गहन अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिरहेका छौं ।
यसअघि नै बोर्डको चारवर्षे रणनीतिक योेजना तर्जुमा भइसकेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । रणनीतिक योजनाले बजार विकास र विस्तारका कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ । धितोपत्र बजार सुधारका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना पनि बनाएका छौं । सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौं । हामीले बनाएका नियम कानूनले लगानीकर्तालाई असहज नहोस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । हामी नियमनकारी निकाय हौं । हामीले लगानीकर्ताको सुरक्षालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । सोही बमोजिम काम पनि गरिरहेका छौं ।